FISOKAFAN’NY PROMADA :: Niampy iray indray ny Foibe ara-kototsaina eto an-drenivohitra • AoRaha
FISOKAFAN’NY PROMADA Niampy iray indray ny Foibe ara-kototsaina eto an-drenivohitra
Notokanana tamin’ny faran’ny herinandro teo, tetsy Behoririka ny “ProdMada” na ny “Proud of Madagascar”, ivon-toerana vaovao natokana ho an’ny mpanakanto amina taranja samihafa, ny tanora ary ireo orinasa madinika antsoina hoe “Startup”.
Hevitra niainga avy amin’ny fahatsapan-dRakotomalala David, mpikambana ao amin’ny Diaspora USA, fa mihavery hasina ary tsy fantatra intsony ny fahendrena nampiavaka an’i Madagasikara eo imason’ny firenena hafa. Amin’ny maha manam-pahaizana manokana azy eo amin’ny fampandrosoana orinasa madinika sy amin’ny maha mpaka sary matihanina azy dia napetrany ho tanjona voalohany ny fananganana ity foibe ity ho fandraisany anjara sy fitondrana anjara biriky eo amin’ny fampiroboroboana ny tontolon’ny kolontsaina sy fanomezan-danja sanganasan’ireo tanora manan-talenta.
“Ny ProMada dia sehatra hoentina hanaporofoana amin’izao tontolo izao fa manana soatoavina sy kolontsaina mampiavaka azy ny Malagasy. Tanjona ny hahamatihanina ireo mpanakanto misehatra fandraharahana ara-kolontsaina sy ara-javakanto, mba hahafahan’ireo mikaroka lalam-baovao any ivelany. Ireo matihanina amin’ny tontolon’ny saripika sy fanodinana rakitsary no mivondrona ato hatreto, ary ho avy tsy ho ela ny sehatra hafa. Tsy mora ny ady hatrehina fa tsy maintsy atomboka ny asa”, hoy Rakotomalala David. Nanomboka omaly dia efa hita ao amin’ity foibe ity avokoa ny santionan’ny hetsika hamaritra ny ho avin’ny ProMada, toy ny fampirantiana, famelabelaran-kevitra ary fizaràna traikefa. Maimaim-poana avokoa izany rehetra izany.
SANTA-BOKATRA :: Namoaka ny “Ataoko afa-po” ny tarika G5